Zimbabwe Yotanga Kushandisa Mafuta eEthanol Paine Mutauro
Gumiguru 17, 2013
WASHINGTON — Kutanga vhiki rino, Zimbabwe yakatanga hurongwa hwekuti vedzimotokari vashandise mafuta e Ethanol akasangana nepeturu. Vanhu vanotosungirwa kuita izvi sezvo zviri zvakatarwa nemutemo.
Asi chii chakanakira mafuta aya anobva muzvirimwa zvakaita senzimbe dzekuChisumbanje idzi?
Kunze kwekukurudzira kucheneswa kwemweya watinofema, mafuta ekufambisa dzimotokari anobva muzvirimwa zvakaita senzimbe anobatsira nyika kuti izvimirire munyaya dzemafuta ekufambisa dzimotokari, kukurudzira budiriro mumaruva, kuderedza hurombo nezvimwe.
Asi nekune rimwe divi, kurima nzimbe idzi kunogona kukanganisawo zvakanyanya nharaunda, kushomeka kwechikafu, mvura uye kukukurwa kwevhu kana zvikasaitwa nemazvo.
Izvi zvinokonzerwa nekuti minda inoda kurimwa nzimbe yakakurisa uye vanhu vanenge vobviswa munharaunda dzavo sezvakaitika kuchisumbanje.
Pasi rino nyika dziri kushandisa mafuta e biofuel aya dzinosanganisira Brazil, China, India, Pakistan, South Africa neAmerica.
Hurumende yeZimbabwe yakaparura chirongwa chekuti zvive pamutemo kuti kambani yeGreen Fuel yekuChisumbanje Ethanol Plant isanganise mafuta e Ethanol anobva munzimbe uye e Nnleaded fuel anoita zvekucherwa pasi kana munyanza.
Kambani yeGreen Fuel iri kushanda nemagaraji akawanda kutengesa mafuta aya uye iri kutengesera vanhu tumidziyo twekuti zvive nyore kuti motokari dzavo dzishandise mafuta aya kana kuti conversion kits.
Pange paine kugunun’una kuti dzimwe motokari dzichafa nekushandisa misanganiswa yemafuta iyi.
Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, VaClaris Madhuku, vanoti vagari vekuChisumbanje vanoda kupihwa mabasa.
Maneja wekambani yeGreen Fuel, VaGraeme Smith, vanotiwo mafuta avo ndeemhando yepamusoro uye vanhu havafanire kutya kuashandisa.
Hurukuro naVaGraeme Smith naVaClaris Madhuku